५२ वर्षको बृद्ध अवस्थामा बिवाह गर्दै सलमान ! हेर्नुस कति थिए उनका प्रेमीका ! - Nepali Cinema News
Home > Bollywood > ५२ वर्षको बृद्ध अवस्थामा बिवाह गर्दै सलमान ! हेर्नुस कति थिए उनका प्रेमीका !
५२ वर्षको बृद्ध अवस्थामा बिवाह गर्दै सलमान ! हेर्नुस कति थिए उनका प्रेमीका !
December 27, 2017 Bollywood
बलिउड अभिनेता सलमान खान अहिले ५२ वर्ष भएका छन् । उनले आज आफ्नो ५२ औं जन्मदिन मनाउने तयारी गरीरहेका छन् । जन्मदिन सँगै उनको जिवनका धेरै कुराहरु बाहीर आएका छन् । ५२ वर्ष सम्म अबिवाहीत रहेका उनको प्रेमिकाहरुको प्रशंगले भने अहिले मिडियामा अलि धेरै स्थान पाईरहेको छ । उनको जिवनामा प्रेमिका आउने र जाने कुराले कुनै महत्व राखेको पाईदैन् । आउनुस आज हामी खानको जिवनमा को को अभिनेत्रीहरु प्रेमिका बनेर आए र को को गए ? यस विषयमा केही चर्चा गर्न गैरहेका छौं ।
अभिनेत्री संगिता बिजलानीको नाम सलमानको प्रेमिकाहरु मध्ये सबै भन्दा पहिले आउने गर्दछ । सलमान फिल्म ईन्डष्ट्रीमा आउना साथ संगिताको प्रेममा परेको चर्चा बेला बेला बलिउडमा संचार माध्यमहरुले गर्ने गर्दछन् । संगिता सँग ब्रेकअप भए लगत्तै सलमानको मन सोमी अलि ले चोरेकी थिईन् । बलिउडमा त्यती चर्चा नापाए पनि सलमान र सोमी बिच राम्रै प्रेम भएको थियो । सलमानको रिसाउने बानी भएकै कारणले गर्दा सोमीले सलमानलाई छोडेर गएको चर्चा चलेको थियो ।
तेश्रो नम्बरमा बल्ल परिन बलिउड सुन्दरी ऐश्वर्या राय । ऐश्वर्या र सलमान बिचको प्रेम भने अलि लामै समय सम्म चलेको थियो । यि दुई करिब ४ वर्ष सम्म एक अर्काको प्रेममा थिए । भारतीय संचार माध्यमहरुले उल्लेख गरे अनुसार एक दिन सलमानले रिसायर ऐश्वर्यालाई एक थप्पड हानेपछि त्यहिबाट उनिहरुको ४ वर्षे प्रेममा पुर्ण विराम लागेको बताईन्छ । ऐश्वर्या सँग ब्रेकअप भए लगत्तै २००३ मा सलमानको जिन्दगीमा कट्रिना कैफको ईन्ट्र भयो । यि दुई पहिलो पटक फिल्म बुमको सेटमा भेटेका थिए । त्यहीबाट यि दुई नजिक हुँदै गए र प्रेमी प्रेमिका सम्म बन्न पुगे । यि दुईको प्रेम चलिरहँदा कट्रिनाले रणबिर कपुरलाई भेटीन र सलमान सँगको प्रेमलाई पुर्ण बिराम लगाईन् । सलमानको जिवनमा छैटौं प्रेमीका बनेर क्लाउडिया सेस्ला पनि आएको चर्चा चलेको थियो । तर सेस्ला सँगको सम्बन्धको विषयमा सलमानले हामी राम्रो साथी मात्रै हौं भनेका थिए । उनले सेस्ला सँग आफ्नो प्रेम सम्बन्ध नभएको बारम्बार मिडिया मार्फत बताए पनि बलिउडमा भने यि दुई प्रेमि प्रेमीका नै भएको चर्चा चलेको थियो । टेलिभिजन कार्यक्रम बिग बोसको पाँचौं सिजनमा सहभागी भएकी फिल्म वान्टेड की अभिनेत्री महक चहल सँग पनि सलमानको अफेयर भएको चर्चा चलेको थियो । सलमान सँगको प्रेम सम्बन्धको कारणले नै महकलाई रातारात चर्चामा पनि पु¥याएको थियो । अभिनेत्री कट्रिना सँग लगभग अनुहार मिल्ने अर्की अभिनेत्री जरीन खान सँग भटेपछि सलमानले पनि महक चहललाई छाडीदिए । जरिन र सलमानको प्रेम सम्बन्धले पनि मिडियामा निकै चर्चा पायो । संचार माध्यमहरुले उल्लेख गरे अनुसार कट्रिना सँग अनुहार मिल्दो जुल्दो भएकै कारणले गर्दा सलमान जरीन प्रति अक्रर्षीत भएका थिय । यि दुईले फिल्म बिर मा एक साथ काम पनि गरेका छन् । जरीन सँग पनि सलमानको सम्बन्ध लामो समय सम्म टिक्न सकेन र उनको जिवनमा फेरी मोडल युलिया वंतुरको ईन्ट्री भयो । हाल सलमान युलिया सँग प्रेम सम्बन्धमा छन् । भारतीय संचार माध्यमहरुले उल्लेख गरेअनुसार यि दुई अब चाँडै नै बिवाह पनि गर्ने तयारीमा छन् । हेरौं अब युलिया सलमानको जिन्दगीमा कति समय सम्म टिक्ने छिन् ।